[solved]Bluetooth ချိတ်မရခြင်းပြသနာကြီး [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Hardware Problems » [solved]Bluetooth ချိတ်မရခြင်းပြသနာကြီး [Problem]
1 [solved]Bluetooth ချိတ်မရခြင်းပြသနာကြီး [Problem] on 13th January 2011, 9:54 am
ကျွန်တော်မှာ Bluetooth Music Receiver တစ်ခုဂယ်ထားတယ်. တံဆိပ်က BELKIN ပါ။ ကျွန်တော် စမ်းတာ APPLE NOTEBOOK (MAC) နဲ့သူံးလို့ရတယ်။ ကျန်တဲ့ Dell, Acer , Toshiba , တော်တော်များများ notebook တွေ နဲ့စမ်းတာမရဘူး.။ဒါပေမယ့် Bluetooth ပါတဲ့ phone နဲ့ကျတော့ရတယ်...ဘာကြောင့်လဲ ဘာသူံးရမလဲဆိုတာ အင်္ကြပေးကြပါ။
2 Re: [solved]Bluetooth ချိတ်မရခြင်းပြသနာကြီး [Problem] on 13th January 2011, 2:37 pm
ဆက်မော် wrote: ကျွန်တော်မှာ Bluetooth Music Receiver တစ်ခုဂယ်ထားတယ်. တံဆိပ်က BELKIN ပါ။ ကျွန်တော် စမ်းတာ APPLE NOTEBOOK (MAC) နဲ့သူံးလို့ရတယ်။ ကျန်တဲ့ Dell, Acer , Toshiba , တော်တော်များများ notebook တွေ နဲ့စမ်းတာမရဘူး.။ဒါပေမယ့် Bluetooth ပါတဲ့ phone နဲ့ကျတော့ရတယ်...ဘာကြောင့်လဲ ဘာသူံးရမလဲဆိုတာ အင်္ကြပေးကြပါ။
ကျွန်တော့ Laptop မှာလဲ အဲ့လိုပါပဲ။ Windows သုံးပြီးချိတ်ရင်မရဘူး။ ဒါပေမယ့် Ubuntu နဲ ့ကျတော့ရနေပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ချိတ်ချင်တဲ့ device နှစ်ခုစလုံးကို Hide မလုပ်ထားမှရမှာပါ။
3 Re: [solved]Bluetooth ချိတ်မရခြင်းပြသနာကြီး [Problem] on 15th January 2011, 8:00 am
[ ဟူတ်လောက်တယ်ထင်တယ် ...... Mac Os နဲံ့ကျတော့ ဟုတ်နေတာဘဲ။ ကျွန်တော် window7မှာပေါ်တယ်ဗျ ဒါပေမယ့်ချိတ်လို့မရဘူး ဖြစ်နေတာ..စမ်းနေတာလဲကုန်နေပြီ......OS ပြောင်းသူံးရမလိုဖြစ်နေပြီဗျျို့ :?
4 Re: [solved]Bluetooth ချိတ်မရခြင်းပြသနာကြီး [Problem] on 17th January 2011, 11:47 am
အဆင်ပြေသွားပြီဗျ Blue Soleil software သူံးလိုက်တာဗျ။ version နိမ့်တဲ့ bluetooth ပစ္စည်းတွေမှာပါတတ်တယ်...
5 Re: [solved]Bluetooth ချိတ်မရခြင်းပြသနာကြီး [Problem]